ट्याग: सुझावहरू Martech Zone
कम्पनीहरूले अनवेक्षित च्यानलहरूमा नयाँ राजस्व चलाउन खोजेको रूपमा, विकास पहलहरू झन् झन् लोकप्रिय हुँदै गइरहेका छन्। तर तपाई कहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ? तपाइँ कसरी सुरु गर्नुहुन्छ? म स्वीकार गर्दछु, यो भारी हुन सक्छ। सर्वप्रथम, किन बिकास पहलहरू अवस्थित छन् भन्ने बारेमा कुरा गरौं। यदि कुनै कम्पनीले राजस्व बृद्धि गर्न कोशिस गर्दैछ भने, ती केहि तरीकाले गर्न सक्दछन्: उत्पाद सीमान्तको विस्तार, औसत अर्डर मूल्य सुधार गर्न, ग्राहकको जीवनकालिन मूल्य बढाउन, आदि वैकल्पिक रूपमा, कम्पनीहरूले नयाँ च्यानलमा झुकाउन सक्छन्।